လက်ကား Semi-Finished 1.499 Polarized Optical Lenses -Polarized Lens-Weihai Dingxin Optical Co. , Ltd ။
လက္ကား Semi-Finished 1.499 Polarized Optical မှန်ဘီလူး
01 ။ S/F CR-39 Polarized မှန်ဘီလူး နည်းပညာဆိုင်ရာ Data ကို
(MM) အမည်ခံ TRUE BASE
၃၄၀ (မီလီမီတာ) အထူ (မီလီမီတာ)
ရှေ့ ရှေ့ နောက်သို့ ရှေ့ နောက်သို့ ရှေ့ နောက်သို့ ဗဟို EDGE
(MM) အမည်ခံ TC rad ပြန်. ET မှန် CT Sag seg seg ပေါင်း Rx Range Recommended
အကှေး အကှေး Inset drop အကွာအဝေး
(MM) အမည်ခံ TC rad ပြန်. ET မှန် CT MRP seg လျောက်ပတ်သောလက်ဝါးကပ်တိုင် Sag ပေါင်း Rx Range Recommended
အကှေး အကှေး ဒီဇင်ဘာ Inset MRP အထက် အကွာအဝေး
1.56 Photochromic Flat-Top HMC (အပြီးသတ် & Semi- ပြီးပြီ)